Ingahambisa amanzi ahlanzekile nendle encane: kanye nenhlayiya ephezulu yokudlula ayikho ngaphezu kuka-100mm
(1) Ingabe ukuthutha amanzi ahlanzekile namanzi kancane ezingcolile, nge abezindaba lokushisa kuze 40 ℃ futhi PH inani 4-10; Ubukhulu obukhulu bezinhlayiya ezidlulayo ngu-100mm.
(2) Izicelo: ukuhanjiswa kwamanzi emadolobheni, amaphrojekthi okuchezukisa, izinhlelo zokukhucululwa kwendle zasemadolobheni, imisebenzi yokuhlanzwa kwendle, izinhlelo zamapayipi esiteshi samandla, ukuhanjiswa kwamanzi kanye namapayipi amachweba, ukuphambukiswa kwenethiwekhi yamanzi, ukuchelela nokudonsa amanzi, okwezolimo nokunye. Ipompo lokugeleza le-axial elicwilisiwe elinokusebenza okuphezulu nokusebenza okuhle kwe-anti-cavitation, kufanelekile ngezikhathi ezinokwehluka okukhulu kwezinga lamanzi nekhanda eliphakeme, ngokuvamile elingaphansi kwama-20m.
2. Ukutshalwa kwemali okuncane esiteshini sepompo, nokusebenza okulula nokuphathwa
(1) Iphampu isebenza ngaphansi kwamanzi, idinga umsebenzi omncane kakhulu wobunjiniyela nobunjiniyela besakhiwo ekwakheni iziteshi zamaphampu kanye nendawo yokufaka encane. Ngenxa yalokhu, izindleko zokwakha zingancishiswa ngama-30-40%
(6) Kuyisinqumo esingcono kakhulu ukuxazulula izinkinga zokuvikela izikhukhula zamamotor ezifakwe eziteshini zamaphampu ezisemifuleni nasemachibini ezinokushintshashintsha okukhulu kwezinga lamanzi. Ngaphezu kwalokho, ngokusindisa ama-axis amade namabhere aphakathi phakathi kwezimoto nepompo, iyunithi ingasebenza ngokuqinile nangokuthembekile.
submersible futha kahle